Ndakaneta Ndiri kuzorora - nyora uye kunyorera kuti ndidhindure
Ndakaneta Ndiri kuzorora - nyora uye kunyora
Ndakaneta Ndiri kuzorora - mavara
Kuongorora kwemimhanzi yevana ichokwadi uye yakaratidza kubatsirwa kwekurara. Izvozvo, pakati pezvimwe zvinhu, zvinokonzerwa nekuti vana vaduku vanoda mimhanzi. Zvimwe zviongorori zvakanyatsonzwisiswa pamusoro pehurukuro yekurara zvakanaka kwekurara zvinoratidza kuti vana vanongouya kuzorora kwakanaka kuburikidza nemimhanzi.
Sheet music and lyrics Wakaneta Ndiri kuzorora
Vabereki haafaniri kuva nyanzvi kuitira kuti vana vavo vazive nezvezvinobatsira zvakanyanya zveimba yevanamwari kana vakavata. Asi kuti uve nechokwadi chekuti chirevo chacho chinenge chakanaka chakanaka, unogamuchirwa kudhindisa mwana wedu-anofarira kugadzirirwa template nemanyoti uye kunyorwa kweraery rhyme. Vana vakakura vanogonawo kupeta mashizha nemanyoti uye kunyora!
Kushandura pamufananidzo kunotanga peji yevaravara nemanyoti uye kunyora pdf format
Ndaneta, enda kunzorora,
Svinura maziso maviri:
Baba, siya maziso ako
Iva pamusoro pemubhedha wangu!
Ndakatadza here nhasi,
Usatarisa pazviri, mudiwa Mwari!
Tsitsi dzenyu neropa raJesu
Zvose zvinokuvadza zvakanaka.
Kure neni, venga uye godo,
Rudo nomutsa mukati mangu.
Rega nditarise paukuru hwako,
Ingovimba chete newe, O Mwari, vimba.
Vese avo vakabatana neni,
Mwari, rega zororo muruoko rwako,
Vanhu vose, vakuru nevaduku,
Nheyo dzinobva kuimba rwiyo rwevana Ndaneta ndakadzoka kuti ndizorore sefriji yefaira yakazaruka
Kids Birthday Game Idea Ndini Ini
Ndiri kuenda nemarambi angu-manotsi uye kunyora
Mimwe mitauro yokune imwe nyika yekukurukurirana
Bvisa nemutambo kune chiroto chiroto Fitness kudya
Ndingaita sei kuti ndisimbise kuzviremekedza kwevana?
Kubva pamwana wako pachako - Ndinozvibata sei?